Iqhubekekisa i-ODM -Imeko emangalisayo yeShishini Co., Ltd.
EL Izibuko zelanga
Izambatho ze-LED kunye nezixhobo
Iminqwazi ye-LED kunye nentloko
Ukuthanda kweqela le-LED
Izibuko zelanga ze-LED
Ngaphezulu kwamaxesha e-300 asebenzisana namava aziwayo kwihlabathi.
Iminyaka engama-20 yokulima okunzulu kolu shishino, kunye neendidi ezininzi zesalathiso sophuhliso.
Iqela le-R & D linabaphandi abangaphezulu kwama-20 beemarike, abavavanyi bemveliso, abayili bemizobo, abayili bezakhiwo kunye neenjineli zombane.
Kwangelo xesha, sineqela lokuthengisa eliphezulu. Banobuchule kakhulu kwaye banokuzisa amava okusebenzisa kakuhle kubathengi.
I-BSCI, i-ICTI, i-ISO, i-SQA, ukuhlolwa kwecoca-Cola, njl.
Iminyaka engama-20 yemveliso kunye namava oyilo kumaqela akhanyayo aseYurophu naseMelika, isitayile kunye noyilo lomsebenzi zinokuhambisana nesingqisho sentengiso.
Isikali sokhetho lwezixhobo
Ukuseka intsebenziswano yexesha elide kunye nobudlelwane nabathengisi bemathiriyeli eluhlaza ukunciphisa iindleko zokuvelisa.
sinenkqubo yemveliso engenasiphako, inkqubo yokuthenga, inkqubo yolawulo lwezinto kunye nenkqubo esemgangathweni.
Sisebenzisa iziqinisekiso zemveliso ezininzi okanye iimfuno zabathengi zokuvavanya kunye nokuvavanya.
Izicatshulwa ezichanekileyo kwimizuzu engama-20 okanye engama-30.
Inkqubo yokuhlola kwakhona ngokukhawuleza
Iqela leprojekthi elikhethekileyo lilandelela, ingxelo yemveliso yangeCawa.
Iintsuku ezi-3 zokuqinisekisa isindululo seprojekthi kunye nekoteyishini. Inkonzo yeentsuku ezili-10 zokuphononongwa ngokukhawuleza ukunceda imveliso entsha.
Inkqubo yokumisa enye
Inkonzo yokumisa kunye nezinto ezivela kwiimveliso.
Inkqubo yoKhuseleko lwePropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda
Sayina isivumelwano semfihlo, amanqanaba amathathu ayimfihlo yemidwebo kunye namaxwebhu.
Inkqubo yokugcina izindlu emva kwentengiso
Iintsuku ezi-7 zokubuya simahla kunye nokutshintshiselana, iinyanga ezili-12 zokuqinisekisa umgangatho.
BONELELA NGEENKONZO ZESISEKO
Iminyaka engama-20 yokulima okunzulu, ukuxhasa abathengi ukwenza iisampulu kunye nezinto zokwakha
Oopopayi, ukonwatyiswa, ifilimu kunye nokwaziswa kweTV
Abathengisi be-e-yorhwebo basimahla
Imveliso entsha yokuveliswa kwetyala
Qalisa ukuqala kwebranti
Umnqamlezo womda wokudityaniswa kwendawo yokusekwa
Ungandixelela iiyure zakho zomsebenzi?
NgoMvulo ukuya ngoLwesihlanu 9: 00-18: 00; ivaliwe ngeeCawa nangeeholide zesizwe.
Zeziphi ii-OEMs ezinamagama amakhulu ezineFlash House?
Iqela lophuhliso "leNdlu yamaSilamsi" libandakanyeke kakhulu kwiimarike zaseMelika naseYurophu, kwaye liyaqhubeka nokubonelela abathengi ngeemveliso ezintsha, ezingaqhelekanga nezikhethekileyo (ezithengisayo), ezithengiswa ngempumelelo eMelika, eYurophu naseJapan. Iindwendwe eziphambili zibandakanya iDisney (kubandakanya iUS / France / Japan / China Hong Kong / China Shanghai Disney), American Wal-Mart / PartyCity / DOLLAR TREE / CVS, German PEARL, French Carrefour and Japan.
Ngaba ndenza iisampulu zeemveliso zakho?
Uninzi lweemveliso lunokuthathwa njengesampulu, kwaye ezinye iimveliso zinokuodolwa kuphela emva komjikelo wemveliso kunye nezinto zokwakha. Unokubhekisa kwiimveliso zethu ezikhoyo. Intlawulo yesampulu ethile ihlawuliswa iimveliso ezenziwe ngokwezifiso. Ngeenkcukacha, nceda unxibelelane nabasebenzi bethu (0755-8237428).
Ngaba iimveliso zakho ziqinisekisa umgangatho?
Ukusukela oko yasekwa, inkampani iyasebenza kunye nophando lweemveliso ezikhanyayo zeminyhadala kunye namaqela, kwaye inolwazi olunzulu lweemveliso ezikhanyayo. Inkampani inabaqulunqi abakhethekileyo, amaxwebhu kunye nabahloli abalawula ngokungqongqo umgangatho weemveliso. Ukuphucula inkqubo yemveliso esulungekisiweyo, ukusebenza ngokungqinelana neemfuno zesatifikethi solawulo lomgangatho wesizwe, sebenzisa isatifikethi semigangatho emininzi yemveliso okanye iimfuno zabathengi zokuvavanywa kunye nokuvavanywa, kwaye zonke iimveliso zisebenzisa izixhobo zokuqinisekiswa kwendalo zeROHS, ezihlangabezana neemfuno zokhuselo lokusingqongileyo kwilizwe liphela.
Iphi idilesi ye-IFlash House?
Xa ufaka iphepha le "Love Flash House", undwendwelo lwakho yeyona nkxaso yethu, kwaye siyakwamkela ngokunyanisekileyo utyelelo lwakho!
Uthando lweFlash House yeHolo: Shenzhen Runde Fengshilai Co., Ltd., ebekwe kumgangatho we-14 weSakhiwo iYongtong, Renmin North Road, Isithili saseLuohu, eShenzhen;
Isiseko semveliso: I-Shenzhen Nuowei Te Electronics Co, Ltd., ibekwe kwi-200-1 Lianxin Road, Wulian Zhugu, kwisithili saseLonggang, eShenzhen;
Ukuhamba okufanelekileyo, ukulungele ukutyelela kunye nokuhlola!
Ngaba ngumzi-mveliso okanye yinkampani yorhwebo?
"Uthando lweFlash House" luphawu lokuzonwabisa lwepati olusuka eUnited States, kwaye lingumboneleli omnye weeholide kunye nemveliso yokukhanyisa kweqela! Eyasungulwa ngo-2006 kwaye ihlala kwiSithili saseLonggang, eShenzhen, ngumthengisi wokumisa omnye wemveliso ekhanyayo iminyaka eyi-13. Inkampani yethu inefektri yayo kunye nezixhobo zemveliso eziphambili, ngaphezulu kwe-4,000 yeemitha zesikwere sendawo yokuvelisa esemgangathweni, kunye ne-R yayo & neqela layo kunye nemveliso. Yonke imveliso evelisiweyo iye yavavanywa ngokungqongqo esemgangathweni. Ukusebenza kwe-OEM yokuxhasa, ukuqhubekeka kwe-ODM, ukuqhubekeka nemizobo, ukuqhubekeka ngeesampulu kunye nezixhobo.
I-Shenzhen rundefeng yezeMashishini CO., LTD
Idilesi yeHolo yoBoniso: Kumgangatho we-14th, iBhlokhi A, Isakhiwo iYongtong, 3146 Renmin North Road
Umnxeba onxibelelanayo: Ngowama-86-755-82374286
Idilesi: Kumgangatho we-14th, iBhlokhi A, Isakhiwo iYongtong, 3146 Renmin North Road
© Copyright - 2021: Onke amalungelo agciniwe. Imveliso eshushu - Imephu yendawo